Ivalwe ngolunye unyawo inyanga yabasha
Ivalwe ngolunye unyawo inyanga yaBasha
IVALWE ngegiya eliphezulu inyanga yabantu abasha kumasipala waseMzumbe. Njengoba inyanga ka-June isuke igcwele inyinyitheka izinhlelo zokuthuthukiswa kwabantu abasha ezweni lonke, umasipala waseMzumbe ubambisene neNational Youth Development Agency (NYDA) noMnyango weZokuthuthukiswa kweZindawo Zasemakhaya neZemihlaba (Department Rural Development and Land Reform) basonge le nyanga yabantu abasha ngokuletha intuthuko kwesinye sezikole sazeMzumbe, iBuhle Bethu High School.
Lo mcimbi obubanjelwe ehholo lomphakathi iNdumakude, khona kuWard-13 ngoLwesibili, ubuhlabahlose ngamakhono ahlukene abekhonjiswa izingane zalesi kole. Kanti inhloso ngqangi yalo mcimbi bekungu kwazisa umphakathi ngentuthuko eshiywe uMnyango, ulungisa lesikole uphinde uthembisa nangokusisiza ngemifundaze kulabo bafundi abenza kahle.
Lesi kole uMnyango weZokuthuthukiswa kweZindawo Zasemakhaya neZemihlaba usilungise ngemali elinganiselwa ku-R150,000.00 ufaka amafasitela, izicabha, sipendwa, kulungiswa nophahla. Kanti uBuhle Bethu kukhethwe ngaphansi kwalolu hlelo njengesikole esisendaweni yasemakhaya kodwa esigila izimanga uma kuziwa kwezokuphumelela kukamatikuletsheni.
Ophethe uphiko lwabantu abasha (Youth Directorate) kulo mnyango, uMnu Godfrey Nkosi uthi intuthuko yabantu abasha ezindaweni zasemakhaya, bayibeke phambili njengohulumeni, kwazise izindawo zasemakhaya bezisalele emuva ngentuthuko ngenxa kahulumeni waphambilini.
“Njengo Mnyango izinhlelo ezefuze lezi, okuwukuthuthukisa izindawo zasemakhaya, abantu abasha nezemfundo sikubeke eqhulwini. Kusijabulisa kakhulu ukuthu sifinyelele nasezinkalweni zaseMzumbe ukuletha lentuthuko. Sithi abantu abasha abaqinise kakhulu kwezemfundo ukuze baqasheke, badale namathuba emisebenzi ngokusungula amabhizinisi,” kubeka uNkosi.
Imeya yomkhandlu uKhansela Sydney Gumede ubonge kakhulu uMnyango weZokuthuthukiswa kweZindawo Zasemakhaya neZemihlaba, waphinde wande wanxenxa umphakathi ukuthi uzigade izakhiwo zomphakathi, njengoba zakhelwe ukusiza bona. “silubonga kakhulu lolu sizo olufakwe uhulumeni kazwe lonke, sicela umphakathi ube iso njengoba intuthuko isuke ilethelwe bona. Abafundi balesikole uBuhle Bethu baphoselwe insalelo manje yokuthi benze kahle kakhulu kunalaba fundi beminyaka eyedlule,” kuphetha uQwabwe.